2 - 4 Sebtember 2020Shanghai, Shiinaha! Ku soo dhowow Cinte Techtextil Shiinaha!
waxaa maamula 20-08-17
Cinte Techtextil Shiinaha ayaa ah carwada ganacsiga hormuudka u ah farsamada dharka iyo waxyaabaha aan lagaraneyn ee Aasiya waxayna kaalinta labaad ka gashay taranka walaasheed ee Techtextil ee Jarmalka oo dhan.
Maxay tahay sababta aan ugu isticmaalnay dareenkeena si aan u baranno waxa loo yaqaan 'Calligraphy'?
waxaa maamula 20-08-08
Maxay tahay sababta aan ugu isticmaalnay dareenkeena si aan u baranno waxa loo yaqaan 'Calligraphy'? Ma ogi haddii aad weli xasuusato in markii aad qorto waraaqaha loo yaqaan 'Calligraphy' dugsiga hoose, iskuullada ay u qalabeyn doonaan hal qof oo dareen yar qaba. Maxaad ugu isticmaashay inaad dareento inaad ku celceliso qaylo-dhaanta? Maanta, soo-saareyaasha dareema ayaa u imanaya inay kuu sheegaan ...
Caruusadaha farta laga sameeyay ee dharka ka samaysan ee aan tolanayn ayaa carruurta u waalan!
Waa salaaman tihiin! Kuwa idinka mid ah oo guriga ku leh Ilmaha, miyaad caado u leedahay inaad sheekooyinka carruurtaada uga sheekeysid habeenkii? Ama la ciyaar carruurtaada waqtigaaga firaaqada ah? Carruurta reerkeenna aad ayey u jecel yihiin waqtiga sheekada habeen walba. Si kasta oo ay u egtahayba
Fiber kiimikada waxay dareentay inaan fiiro gaar ah u siino waxa muhim ah
Waxaa jira meelo badan oo isticmaalka fiber kiimikada la dareemay, dareenka ayaa aad u wanaagsan, meelo badan ayaa ku lug leh. Laakiin adeegsiga sheygan waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah siino qodobada qaar, si sida ugufiican loo isticmaalo. Qulqulka nolosheena waa ins ...